Ciyaaryahan Patrick Ekeng oo geeriyooday, xilli uu Kubad Ciyaaraayay – STAR FM SOMALIA
Ciyaaryahan Patrick Ekeng oo geeriyooday, xilli uu Kubad Ciyaaraayay
Ciyaar yahay u dhashay dalka Cameroon, ayaa geeriyootay xilli uu ciyaaraayay kubad dhexmaraysay horyaalka dalka Romania.
Patrick Ekeng oo Ciyaarta iyadoo socota bedel ku soo galay, ayaa wuxuu ciyaaray kaliya 7 daqiiqo kadibna mar kaliya ayuu miir daboolmay oo uu istaaga ka dhacay.
Dhaqaatiirta qaabilsan dhanka caafimaadka Ciyaartoyda ee Garoonka ku sugneyd ayaa durba ku soo yaacay Patrick Ekeng, hayeeshe marki ay hubiyeen ayeey xaqiijiyeen inuu geeriyooday.
Patrick Ekeng oo Ciyaartooy laacib ah ayaa la sheegay markii uu kubadda Ciyaaraayay inaysan jirin ruux kale oo ay isku dhaceen ama jug ka soo gaartay.
26-jirkaan dhintay isaga oo Kubadda Ciyaaraya ayaanan aheyn Ciyaaryahankii ugu horeeyay ee geeriyooda, xilli kubadd ay socoto.
Sanadihii la soo dhaafay, tiro ciyaartooy Afrikaan ah ayaa dhintay xilli ay dheelayeen.
Tababare Jose Mourinho Oo Kaliya Hal Shuruud Ku Fasixi Doona Anthony Martial
Robert Lewandowski Oo U Deyriyay Man Utd, Chelsea & Man City Isagoo Sugaya Real Madrid.